Farmaajo oo ku guulaystay meelmarinta qorshihii Afwerki, xukunkana ku haysan lahaa | SMC
Home WARARKA MAANTA Farmaajo oo ku guulaystay meelmarinta qorshihii Afwerki, xukunkana ku haysan lahaa
Farmaajo oo ku guulaystay meelmarinta qorshihii Afwerki, xukunkana ku haysan lahaa
Ciidamada Sirdoonka ee dalka Eritereeya ayaa labadii sano ee u danbeeysay waxa ay ka wadeen dalka Soomaaliya howlo lagu xaqiijinayo in Madaxweyne Farmaajio iyo kooxdiisa xukunka la wadaagto ay ku joogi lahaayeen ama ay ku nagaan lahaayeen xukunka dalka Soomaaliya sanado badan.
Madaxweyne Isaias Afwerki ayaa waxa uu ka mid yahay madaxweynayaasha Afrika ee xukunka dalkiisa haysto mudo ka badan 20 sano. Afwerki ayaa waxa uu abuuray awood siyaasadeed iyo mid ciidan oo keentay in uu dalka ka sameeyo hogaan kaligii talis ah taas oo u suuragalisay in uu dalkiisa ka mamnuuco mucaaarad iyo kooxaha diidan xukankiisa.
Afwerki oo dhowr kulan la yeeshay Madaxweyne Farmaajo ayaa u balan qaaday in uu uga faa’iidaynayo aqoontiisa la xiriirta caburinta iyo ku nagaanshaha awooda dalka mudo dheer. Saraakiil ka socota dalka Eritereeya ayaa hadda ku sugan magaalada Muqadisho kuwaas oo ku jooga magaca macalinimo iyo ururuada bixiya macaawida ee sida gaarka ah loo leeyahay, laakiin saraakiishaas ayaa ku howlan sidii loo xaqiijin lahaa in Farmaajo dib loo soo doorto ama si xoog leh uu ku haysto xukunka. Waxaa loo dajiyay qorshooyin iyo barnaamijyo salka ku haya awood kordhinta Madaxweyne Farmaajo.
Howlaha iyo talaabooyinka uu fuliyay Farmaajo ilaa hada waxaa ka mida;
Cuno qabateynta shacabka: In cunaqabatayn joogta ah lagu hayo shacabka guud ahaan gaar ahaan kuwa ku nool caasimada dalka ee Muqdishu. Dhagxaanta sida joogtada ah loogu xiray wadooyinka Muqadishu ma aha kuwa lagu sugayo amaanka oo kaliya balse waa mid lagu xaqiijinayo in shacabka ku dhibtoodaan kuna mashquulaan sidii ay u raadsan lahaayeen nolol maalmeedkooda.
Dhanka kale talabadaan waxa ay shacabka ku abuuraysaa cabsi joogta oo keenaysa in ay ka baqaan dowlada iyo ciidankeeda. Dhqankaan waa dhaqan ka shaqeeyay dalka Eriteereya, Shacabka ku dhaqan magaalaayinka waa weyn ee dalkaas ahaa ku nool xaaalad baahi aan dabiici ahayn oo la dul dhigay.
Abaabulka xoogaga wadaniyiinta: Farmaajo ayaa ka abuuray degaanada ay ka kooban tahay magalaada Muqadishu kooxo la shaqeeya dowlada oo lagu magacaabo Xooga Wadaniyiinta, kuwaas oo qabanaya dhowr shaqo: a) Fidinta borobogandada dowlada oo ay ku jirto baahinta awooda ay dowlada ku leedahaya dalka, b) La shaqeeynta hay’ada sirdoonka Qaranka si loo helo xogaha ka jira guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir, c) fududenta dilka iyo xiritaanka mucaaradka ka soo horjeeda Dowlada, iyo e) Abaabulka iyo jihaynta shacabka ku dhaqan Golka Banaadir. Jihaynta iyo maamulka kooxdaan ayaa hoos timaada Xafiiska Madaxweyne Farmaajo.
Cadaadiska iyo Musaafurinta Mucaaradka dowlada: Dowlada Eiretreeya ayaa si joogta ah ugala talisa Farmaajo qaabka loo cadaadinayo mucaaradka dowlada taas oo ka kooban sadax qaybood: a) abuurintaanka ciidamo ku hubaysan bistoolado oo loo adeegsanayo dilka mucaraadka dowlada kuwaas oo ay ka mid yihiin saraakiisha ciidan ee lagu tuhmayo mucaaradnimo, siyaasiyiinta magaca ku dhex leh shacabka Soomaaliyeed iyo hogaanka ururuda bulshada oo ay ku jiraan oday dhaqameedka
In bahdil isugu jira xarig iyo xakameynta dhaq-dhaqaaq lagu sameeyo siyaasiyiinta magaca ku leh shacabka ama hory u soo qabtay hogaanka dalka. Tani waxa ay keenaysaa in si dadban loo dilo qayimkooda iyo karamaadooda taas oo ugu danbeeyntii keeni doonta in ay dalka isaga cararaan oo ay dibada ka soo hadlaan.
Shaqo ka fariisinta saraakiishii hore: Si loo badalo hogaankii hore ciidanka , waa in la helo dhalinyaro fir-fircoon oo rajo ka qabto mustqabalka hogaanka dalka. Dhalinyaradaan oo aan qibrad lahaynin ayaa gacanta loo galinayaa hogaanka ciidanka. Dhalintaan ayaa toos u hoos imaanya Farmaajo taas oo soo yaraanayso saaameynta ay madaxdii hore ku lahaan karaan ciidanka iyo hogaankooda.
Ciidamo lagu soo tababaray dalka Eritereeya:
Si loo helo ciidamo taageero buuxda u haya hogaana Madaxweyne Farmaajo kuna shaqeeya amarkiisa, dowlada Eritereeya ayaa waxa ay dalkeeda ku soo tababaraysaa ciidan ka kooban labo dufco oo tiro ahaan garaaya 1,000 ciidan. Ciidankaan ayaa waxa la soo siiyanayaa tababaro isugu jira, la dagaalanka mucaraadka, caburinta shacabka , arimaha sirdoonka iyo istcimaalka xeeladaha kala duwan ee lagu caburiyo shacabka. Ciidankaan ayaa dufcadiisii u horeeysay la filayaa in ay dalka ku soo noqdaan bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
Madaxweyne Farmaajo oo taageero ka helayo Madaxweynaha dalka Eritereeya ayaa kalsooni buuxda ku qabo inuu dalka madaxweyne ka sii ahaan doono 20 sano ee soo socota. Farmaajo ayaa u muuqda in uu ku guulaysaty in uu dhaqangaliyo qaybo ka mida talooyinkii uu soo jeediyay Madaxweynaha dalka Eritereeya Isaias Afwerki. Mucaraadka ku sugan magalaada Muqadishu ayaa u muuqda kuwa aan wax war ah ka haynin xukunka adag ee uu Farmaajo udubka u taagtay isaga oo ayan jirin cid uu ka baqayo.
Cidii doonta ha dhaleeceyso Madaxweyne Farmaajo, laakiin waa hogaamiye haysta qorsho cad oo uu doonayo in uu xukunka dalka ku haysto? Dhanka kale waxaa ka soo jeeda mucarad kala qaybsan, qorsho aan lahaynin isla markaan ayan u muuqan wadadii ay kula dagaali lahaayeen Farmaajo iyo kooxaha uu ku adeegto.
Previous articleKenya iyo Itoobiya oo isku dhinac noqday, iyo Jabuuti iyo Somalia oo isla saftay: Loolan ka dhex socda IGAD
Next articleFaahfaahin Nabadoon lagu dilay Afgooye